पहिले–पहिले होली सुरु हुनुभन्दा एक साता अघिदेखि लोला हानेर बाटोमा हिँड्नै गाह्रो हुन्थ्यो, तर अहिले भने आफूले खेल्दिन भने पछि अतिरञ्जित ढंगले लोला हान्दैनन्, त्यसैले पहिलेको तुलनामा विकृति घटेको छ ।
बबिना भट्टराई, गायिका
विकृति बढेको हो कि जस्तो लाग्छ । पहिले आफ्नो घर परिवार, छिमेकी साथीभाइहरूसँग सामान्य ढंगले होली खेलिन्थ्यो, तर अहिले होलीको नाममा जाँड–रक्सी, भाङ आदि खाएर होहल्ला गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।
खासमा होली पर्व पहिलेको जस्तो तामझामका साथ मनाउन छाडिसकिएको छ । डिजिटल जमानाले हालीलाई बिगारिसकेको छ । अहिले साथीभाइ भेट भएर खुला ठाउँमा होली मनाउनेभन्दा पनि इभेन्ट होली मनाइन्छ जसले गर्दा पहिलेको जस्तो माया, सद्भाव साटासाट गर्ने होली मर्दै गएको छ । अहिलेको होलीमा विकृति छैन, तर मौलिकता चाहिँ हराएको होकी जस्तो लाग्छ ।
होलीको विकृति बढेको छैन मात्र होली खेल्ने तरिका बदलिएको छ । पहिले पानी छ्यापेर होली खेलिन्थ्यो अहिले दारुको बोतल च्यापेर होली खेलिन्छ कुरा यत्ति हो ।
होलीले केही पनि बिगार्दैन, यसले त आफ्नोपनको बोध गराउँछ । हामी नेपालीहरू अरुको चाड मनाउन मरिहत्ते गर्छौं, त्यो चाहिँ विकृति हो । आफ्नो चाड मनाउनु कुनै पनि हालतमा विकृति होइन । यसले त हाम्रो संस्कृति नै जोगाउँछ ।
होलीमा विकृति बढे जस्तो लाग्छ । अहिले होलीको महत्व नबुझी सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोष्ट गर्नकै लागि भए पनि होली खेल्ने चलन छ । जाङ्मु इन शेर्पा, मोडल
अहिले होलीको विकृति घटेको होइन । यसलाई मनाउने शैलीमा मात्र परिवर्तन आएको हो । यसले हामी कलाकारहरूलाई भने फाइदा नै भएको छ । होली जस्ता कार्यक्रममा हामीलाई निम्तो गर्ने चलन बढेको छ । यसपालिको होलीमा म नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूलाई हँसाउन अष्ट्रेलिया जाँदैछु ।
होली के हो ? किन मनाइन्छ ? कसले मनाउँछ ? भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् जस्तो लाग्दैन । त्यसैले पनि होलीले आत्मियताभन्दा पनि विकृति बढाइरहेको छ । यो युवाहरूलाई मनोरञ्जनको नाममा मनपरी गर्ने भाँडो भएको छ ।
होलीको विकृती धेरै नै कम भएको छ । समाजमा आएको चेतनाका कारण अरुको अधिकार र स्वतन्त्रताको सबैले कदर गर्ने परिपाटी आए जस्तो लाग्छ ।
विकृति पक्कै पनि पहिलेको तुलनामा घटेको हो । केही समयदेखि सरकार नै होलीमा हुने विकृति नियन्त्रण गर्न लागि परेकाले पनि अहिले विकृति घटे जस्तो लाग्छ ।
विकृति बढे जस्तो लाग्छ । किनभने कामधाम छाडेर ज्यान नै बाजी थापेर होली खेलिरहेका हुन्छन् जसले गर्दा पहिलेदेखिका विकृतिमा कमी आएजस्तो लाग्दैन ।
विकृति बढेको हो कि जस्तो लाग्छ । पहिले सौहार्दपूर्ण तरिकाले समयमा खेल्ने, समयमा छाड्ने हुन्थ्यो । अर्को कुरा अहिले समूहमा होली मनाउने चलन छ जसले गर्दा जथाभावी रङ खेल्दा दुईपक्षबीच झगडा पनि भएको पाइन्छ ।
स्वरुपराज आचार्य, गायक
होलीमा मात्र होइन हरेक चाडपर्वमा विकृति बढेको छ ।
बढेको हो, किनभने होलीमा रातो रङले मात्र होइन विभिन्न केमिकलयुक्त रंग पनि इच्छाविपरीत दलिदिने जस्ता घृणित कार्य समेत भैरहेको छ । यस्तै, जाँड–रक्सी पिएर होली खेलेको पनि देख्छु, त्यसैले विकृति घटेको छैन ।
मेरो अनुभवमा बढे जस्तो लाग्छ, किनभने बढ्दो तडकभडक र खराब पदार्थहरू प्रयोग गर्ने, मादक पदार्थ सेवन गरी होली खेल्नेहरू बढेका छन् ।
अलि बढी नै भएको छ भने लोला तथा फोहोर पानी हान्ने प्रचलनले गर्दा रंगले रंगिने, आपसमा मित्रता आदान–प्रदान गर्ने हाम्रो हिन्दू परम्परा नै लोप हुन लागेको छ ।
पहिलेको तुलनामा घटे जस्तो लाग्छ । पहिले होली आउन दुई हप्ता बाँकी हुँदै बाटो हिंड्न गाह्रो हुन्थ्यो, तर अहिले त्यस्तो छैन । कानुनी कारबाही हुने भएकाले होला कि कम भएको ?
१०–१५ दिनअघिदेखि नै लोला हानेर, छाडा तरिकाले विशेष गरी महिलाहरूलाई हिँड्डुल गर्नसम्म नदिने वातावरणका कारण विकृति बढेको छ भन्न सकिन्छ ।
होलीको विकृति घट्नुको साटो बढेकै छ ।
अपिल विष्ट, निर्देशक
केही वर्षयता अलि घटे जस्तो लाग्छ । पहिले होली आउनुभन्दा महिना दिन अघिदेखि लोला खाइन्थ्यो । कति बेला, कहाँबाट लोला आउँछ थाहा हुन्नथ्यो । कामको सिलसिलामा स्कुल अथवा अफिस हिँडेको मान्छे हैरान हुनु पर्थ्यो ।
प्रत्येक वर्ष विकृति बढेको देख्छु । होलीका दिन धेरै जना इच्छाविपरीत रंगिएको देखेको छु । यो एकदम गलत प्रवृत्ति हो । पर्व मनाउने नाममा मानिसहरूलाई दुःख दिने काम भैरहेको छ । विशेषगरी महिला दिदी–बहिनीहरूले आफ्नो इच्छाविपरीत रंगीन बाध्य हुनुपर्छ ।
सन्तोष कोन्मे, संगीतकर्मी
प्रहरी–प्रशासन अलि कडा भएको हुनाले विकृतिमा कमि आएको हो कि जस्तो आभाष हुन्छ ।
सशान कँडेल, गायक
पहिलाको तुलनामा अलि कम भएको हो । यद्धपि, पछिल्लो वर्ष पनि प्लाष्टिकमा फोहोर पानी भरेर मानिसहरुलाई हानेको देखेकै हो ।
अनुष्का पाठक, गायिका
होलीका नाममा विभिनन प्रकारका विकृती विसंगती भित्रिएको छ । जाँड–रक्सी खाने, हो–हल्ला गरेर अरुलाई दुःख दिनु गलत पक्ष हो । विगतका वर्षको तुलनामा विकृती चाहिं घटेकै हो ।
सन्तोष सेन, चलचित्रकर्मी
होलीको विकृती बढेको होइन, समाचारका माध्यम बढेको र समाचार बनाउने चलनले
विकृती बढेको हो कि भन्ने लागेको होला ।
दिनेश डिसी, रेडियो/चलचित्रकर्मी
पछिल्लो केही वर्ष यता होलीमा विगतको तुलनामा कम विकृती देखिएको छ । मलाई लाग्छ होली समुहमा मनाइने पर्व हो । होली मनाउने क्रममा आफ्नो खुशीको लागि अरुलाई दुःख दिनु हुँदैन । त्यसैले अचेल होली मनाउनेहरुमा पनि चेतनाको विकास भएको जस्तो छ । मानिसहरु आफन्तसंग, आफ्नो मन मिल्नेसंग मात्र रमाएर यो पर्व मनाउन थालेका छन् ।
हेमा मानन्धर, गीतकार